"Ugwadule Imbali" - ibhayisikobho wathwebula 2009 kwethi eponymous. Model, actress, isishoshovu kwezenhlalo isinqumo embule iqiniso ngalokho kwenzekani ngempela nabesifazane abaningi abayitholayo ezweni lakubo ekhaya. Konke lokhu wena izofunda Uoris Diri. "Ugwadule Imbali" kuyinto incwadi kwakhe mayelana ukuphila kwentombazanyana, futhi esikhathini esizayo - ezweni imodeli abadumile owazalelwa eSomalia ngo 1965 emndenini labantu abayimizulane. Waris izinkulumo efudumele mayelana nomkhaya wakubo, ikakhulu unina. Ngo abazali wentombazane nginezingane 12. Ehlane, kwezimo ezinzima kakhulu - nzima nokuthola ukudla futhi phezu kwamanzi, akudingeki ukuba dream, njengoba kungaba ukulinda kokunye izinyanga eziningana. Ngakho-ke, ngasinda izingane eziyisithupha kuphela, phakathi kwawo - imbali ehlane, Waris.
Lapho eseneminyaka engu-5 ubudala, ephenywa isiko ngonya ukusoka abesifazane, okuyinto phakade kwashintsha impilo yakhe. Ngemva lentombazane isikhathi eside ukuba ngilulame, kodwa ngisho namanje uyavuma ukuthi wayengakwazi ukuthola ukuthi ukuphulukiswa ezifweni noma zokuziphatha.
Ngokusho imithetho ehlane babethi amantombazane ashade off ekuseni kakhulu futhi waba nenhlanhla ukuze ashade indodakazi ukuba umuntu othile onothileyo, njengoba imali nomkakhe, wayekwazi ukunikeza ukuphila okunethezekile ukuba umndeni wakhe isikhathi eside. Lapho ngineminyaka engu-13, Waris ebalekela umkhaya. Wayesaba ukuba ashade ixhegu onikeze njengoba lokukhokha kuyisezala 5 amakamela. Kwaphela isikhathi eside ezulazula ehlane, abaphethwe ekulambeni nasekomeni, intombazane ekugcineni uthola idolobha, lapho udadewabo uhlala. Waris wayohlala naye ngaleyo ndlela egcwalisa isinkwa sakhe uyisebenzisa endlini.
Kamuva, ungatholi kanye nodadewabo, le ntombazane iqala ukukhonza endlini okuthile okulimazayo ezihlotsheni zawo obabekazi, bese kuthi izihlobo oqavile wamthatha eLondon Waris asize umkakhe sibhekane ngokuphumelelayo yemfanelo yasekhaya. Ngize kulo muzi ke ngosizo imibhalo kokuzihlanganisa, okuyinto wabonisa ukuthi wayengeyena 13, kodwa iminyaka engu-18. UMalume intombazane wasebenza kakhulu ngendlela iminyaka 4. Lapho Waris engu-16 ubudala, wabona omunye umthwebuli wezithombe ngegama Malkolm Feyrchayld, ngubani wamkhuthaza ukuba abe imodeli. Ecabanga ukuthi ngale ndlela afuna ukuthola kuwo okuthile wenqaba. Umthwebuli ngaphezu kwesikhathi esisodwa wamnika umsebenzi, ngisho wafika u-anti wakhe, kodwa wenqaba. Ngakho-ke, uyokwazi ukusebenza ndawonye kuphela emva kweminyaka 2, lapho namanje alinge ukwamukela lesi sipho. Ngemva kwezinyanga ezingu-2, Waris wamenywa ukuba ukulahlwa ejensi ukumodeliswa Crawford ke hhayi kuphela yokutholwa isakhiwo esiyisisekelo models, kodwa wanika nama-oda kuqala - ukuqopha for ikhalenda Pirelli. Ngemva isiphelo sesimiso inkontileka Waris, owawuke wahlala ehostela ne abafundi kanye umhlalaphansi, futhi wasebenza njengoba wezindlu ku "McDonald", ngaqala ukuthola £ 500 ngalunye usuku ukuqopha. Ngemva kwalokho inkontileka yena inkanyezi ku uJames Bond ifilimu. Kodwa, naphezu impumelelo lokuqala, kwakukhona ukusikhohlisa emsebenzini wakhe. Waris wasala ngaphandle ngamakhaya kanye Wasongelwa sekudingiselweni Somalia. Wayefuna ukuqinisekisa ukuthi umama ukhululekile ukuguga, ngakho ukubuya akuyona ingxenye izinhlelo zakhe. Le ntombazane ingena umshado nge American okuthiwa Nigel. E-United States I esabalindele impumelelo yakhe. Wazamukela eziningi oda futhi wabambisana izinkampani abaziwayo. Kancane kancane, ubuso bakhe ngokuya baqala ukuvela ku izembozo omagazini fashion, okuyinto wamngenisa udumo emhlabeni. Ngemva kwesikhathi esithile, Waris futhi kufika e Somalia, futhi wakwazi ukubona umama. Encwadini "Ugwadule Imbali" ukuchaza zonke imizwa ngasinda Heroine emhlanganweni nomama wakhe.
Ngolunye usuku, babe delirious endaweni yokucima ukoma jazz, lapho ahlangana ngayo no-uthando lwakhe - wesigubhu Dana, kamuva ambiza washada. Ngokusebenzisa isikhathi, lo mbhangqwana kwadingeka indodana, owayebizwa ngokuthi Aliki, okusho "ibhubesi ubudala".
"Ugwadule Imbali" - incwadi besesitelekeni ukwethembeka kwalo futhi ohlolayo. Lena indaba kabuhlungu owesifazane abanamandla usethole injabulo, kodwa akazange neze ayeke ukuhlala ukuphulukisa isilonda ngokomzwelo. Kamuva incwadi "Ugwadule Imbali" yathathwa, ukuze abantu ukubona ukuthi isenzeka kwamanye amazwe, balwa nalo.
Indlela thunga petticoat ngokushesha?